तिजमा दर खाँदा यसरि पकाउनुहोस् “ढकनि” – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ भाद्र १५, आईतवार १०:३४
नेपालीहरु संस्कृतिबाट बिमुख हुँदै गईरहेको भन भै रहेको र हाम्रा चाडवाड आधुनिकताको नाममा बिकृति घुसाउदै छाडा बनेको सर्वबिधितै छ । कता गए ति बिरहीका गीतहरु ? ति हातका थपरिहरु, ति मजुरा, ति खैजंडी ? घरमा फुपू दिदि, दिदि-बहिनिको त्यो रौनक सबै हराए । हाम्रो संस्कृती हामीहरुलेनै हो जोगाउने हो, अरु कोही आएर जोगाउनेवाला छैन । संस्कृतीलाई कसरी कुन वाटोमा लैजाने भन्ने कुरा कलाकारको हुन्छ तर त्यो समग्र सवै कुरालाई सहि तरिकाले अगाडी लैजाने कुरा नेपाली भएको नाताले एक-एक तपाई हामीको पनि हो ।
– सेफ लक्ष्मण प्रसाद भण्डारी (अध्यक्ष)
ग्लोबल नेप्लिज सेफ फेडेरेशन
सम्पूर्ण हिन्दु धर्मवावलम्बी नारीहरुमा तीजको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ! सबैका श्रीमान राम्रा होउन, नभएकाले राम्रा पाउन् भन्ने पूर्ण आशा श्री पशुपति नाथसंग राख्दै उपवासको समयमा पानी अत्याधिक पिऊ !